နိုင်ဝင်းသီ ● တစ္ဆေ | MoeMaKa Burmese News & Media
ဖြူလွလွတိမ်တိုက်တွေကြားမှာ တရိပ်ရိပ်နဲ့ လွင့်တက်ပျံသန်းနေတာ ကျွန်တော်မှ ကျွန်တော်အစစ်ပါ။ တခါတခါ မြူခိုးပြာ တွေ မှုန်ဝေနေတဲ့ တောင်ကြီးတွေက ကျွန်တော့်ဆီ ပြေးတက်လာလိုက်။ အေးစက်ငြိမ်သက်နေတဲ့ ချင်းတွင်းမြစ်ရေကြည်ထဲ ကျွန်တော်ထိုးဆင်းသွားလိုက်။ စိမ်းမြရွက်ချွန်မျှင်တွေကြားမှာ ကျွန်တော်ဟာ ရှပ်တိုက်မျောပါသွားလိုက်နဲ့ ကျွန်တော့်ခန္ဓာ ကိုယ်တခုလုံးဟာ မယုံကြည်စရာ ကောင်းလောက်အောင် ပါးလှပ် ပေါ့ပါးနေလေရဲ့ ………။
ဟော…. ဟော…. မျက်လုံးတွေ…. မျက်လုံးတွေ …. ကျွန်တော့်ဘေးမှာ ကြယ်ပွင့်တွေလိုစုဖွဲ့အုံခဲနေတဲ့ မျက်လုံးတွေ…. အဲဒီမျက်လုံးတွေကြားက အညိုရောင်တောက်ပနေတဲ့ မျက်ဝန်းတစုံကို ကျွန်တော်မြင်တွေ့ခဲ့ဖူးပါသလား။ သိပ်သေချာ တာပေါ့။ အဲဒီ မျက်လုံးညိုညိုတွေကို တနေရာရာမှာ မြင်ဖူးခဲ့တယ်ဆိုတာ သိပ်ကိုသေချာခဲ့တာပေါ့။
“ကျွတ်” ပူလိုက်တာဗျာ။ ကျွန်တော့် ခန္ဓာကိုယ်တခုလုံးဟာ ဘာဖြစ်လို့များ ဒီလောက်တောင် ပူပြင်းလောင်မြိုက်နေရပါလိမ့်။ ညံ့သက်တဲ့ လက်ဖဝါးတဖက် ကျွန်တော့်နဖူးပြင်ကို ဖွဖွညင်ညင်လေး လွင့်ကျလာချိန်မှာပဲ လက်ကနဲဖြစ်သွားတဲ့ ငွေရောင် အပ်ချွန်မျှင်တစင်းကို ကျွန်တော်မြင်လိုက်ရပါတယ်။
“လိုက်ခဲ့ပါကွ။ ဟိုမှာ မင်းမမြင်ဘူးတဲ့ ရေမြေတောတောင်သဘာဝအသစ်တွေကို မင်းမြင်ရမယ်။ မင်းနဲ့အစိမ်းသက်သက်ဖြစ် နေတဲ့ တောရနံ့ တောင်ရနံ့တွေကို မင်းမြည်းစမ်းခွင့်ရမယ်။ လူပေါင်းစုံရဲ့ ဘဝမျိုးစုံ မျှော်လင့်ချက်မျိုးစုံကို မင်းထိတွေ့ ခွင့်ရမယ်။ အဲဒီလိုဒေသမျိုးကို မင်းရောက်ဖူးသင့်တာပေါ့ သူငယ်ချင်းရာ”
“မနေ့ညနေက ဆရာဝန်လာသွားတယ်၊ ဆေးထိုးပေးသွားတယ်။ သောက်ဆေးလည်း ပေးသွားတယ်။ ဆေးသောက်ရမယ် နော်”
“ဒီရောက်တဲ့နေ့ထဲက ဖျားနေတာ။ ညကလည်း တညလုံး လူးလှိမ့်ပြီးအော်ဟစ်နေတယ်။ ကိုယ်တွေကလည်း တအားပူတယ်။ ပုသိမ်ကိုသွားမယ်ဆိုပြီး တညလုံး ကယောင်ကတမ်းနဲ့ အော်နေတယ်”
ဘုရား…ဘုရား… ပုသိမ်ကိုသွားမယ်ဆိုပြီး တညလုံးအော်နေတယ်ဆိုပါလား။ သေလိုက်စမ်းပါကွာ။ ပုသိမ်ကို ဘာသွားလုပ်ရ မှာလဲ။
ဘုရား…ဘုရား ။ သူဟာ…အဲဒီ မျက်ဝန်းညိုညိုနဲ့ မိန်းကလေးဟာ…..
ရန်ကုန်က မန္တလေး …
မန္တလေးက မုံရွာ …
မုံရွာက ဟုမ္မလင်း …
ဟုမ္မလင်းက သောင်ထွတ် …
ဟုတ်ပါတယ်။ ရောင်စုံမီးပန်းပွင့်တွေ တဖျပ်ဖျပ်ပြေးလွှားနေတဲ့ ရေတမာပင်အောက်မှာ ကျွန်တော်မူးနေပါတယ်။ ကျွန်တော် တအားကြိုက်တဲ့ “နွေရောက်မှာကြောက်တယ်” သီချင်းလေး ကျွန်တော့်ကိုယ်ထဲကို ကြေကြေကွဲကွဲနဲ့ စီးဝင်သွားလို့လည်း ကျွန်တော်မူးပါတယ်။ မဂ္ဂဇင်းတခုမှာ ရုတ်တရက်သေဆုံးသွားခဲ့တဲ့ ကျွန်တော့်ဝတ္ထုလေးတပုဒ်ကို လွမ်းဆွတ် သတိရပြီး တော့လည်း ကျွန်တော်မူးပါတယ်။ ကျွန်တော့်ကို အမြဲတမ်းမေ့လျော့ထားခဲ့တဲ့ ဧရာဝတီမြစ်တဖက်ကမ်းက မိန်းမတယောက် ကြောင့်လည်း ကျွန်တော်မူးပါတယ်။
“တွေ့ရတာ ဝမ်းသာပါတယ်နော်။ ညိုမီပါ ”
“ဒီမှာ ဘာလာလုပ်တာလဲ ညိုမီ”
“စာရေးတယ်မို့လား။ ရေးလက်စ စာမူလေးတွေ တွေ့လိုက်ရလို့ပါ”
“စာရေးတဲ့လူဆိုတော့ ဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လိုအဓိပ္ပါယ်မျိုး ဖွင့်ဆိုတယ်မပြောတတ်ဘူး။ အထူးသဖြင့် ကျွန်မတို့လို မိန်း ကလေးတွေရဲ့ ဘဝမျိုးတွေကိုပေါ့လေ”
အပြစ်မဲ့တဲ့ လူသားကလေးငယ်တယောက် ကမ္ဘာမြေကြီးပေါ် ရဲရင့်လန်းဆန်းစွာခြေချနိုင်ရေးအတွက် …..
ကမ္ဘာမြေရဲ့ ဆင်ဖိုနီတေးသွားများကိုအဲဒီကလေးငယ် ငြိမ်းအေးချိုလွင်စွာ ဟစ်ကြွေးနိုင်ရေးအတွက် …..
ညိုမီရဲ့အဖေဆိုတာ အရှက်တရားရဲ့စေ့ဆော်မှုကြောင့် သူ့ကိုယ်သူ မလှမပ အဆုံးသတ်သွားခဲ့တာ။ မြွေတွန်သလို ချောင်း တရွှီရွှီဆိုးလေ့ရှိတဲ့ ညိုမီ့ရဲ့အမေဟာ ကြိုးတန်းလန်းနဲ့ လှုပ်ရမ်းနေဆဲဖြစ်တဲ့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူကို အထိတ်တလန့်ကြည့်ပြီး ချောက်ချားစရာ အသံနက်ကြီးနဲ့ တအားအော်ဟစ်လိုက်တာ။ အပျိုပေါက်အရွယ် ညီမငယ်နှစ်ယောက်ဟာ တယောက်ကို တယောက် တင်းကျပ်နေအောင်ဖက်ပြီး ရှိုက်ကြီးတငင် ငိုကြွေးနေကြတာ။ တပတ်တောင်မပြည့်သေးတဲ့ နီနီထွေးထွေး ကလေးငယ်လေးဟာ အဖြစ်အပျက်တွေကို နူးညံ့ဝိုင်းစက်တဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့ ငေးငေးရီရီ ကြည့်နေခဲ့တာ …..
“ကျွန်မလေ ကိုယ့်ကိုကိုယ် မကျေနပ်ဘူး။ လူတွေကိုလည်း မကျေနပ်ဘူး။ ကျွန်မကိုယ်ကျွန်မလည်း ဘယ်တော့မှ ခွင့်လွှတ် မှာမဟုတ်ဘူး”
ချမ်းတယ်…ချမ်းတယ် … ကျွန်တော်တကယ်ပဲ ချမ်းတုန်လာပါပြီဗျာ။
“ကိုယ်တွေကလည်း ပူကျွတ်နေတာပါလားကွာ။ ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကွာ။ ဖျားတာသက်သက်ပါ။ ကိုမျိုးကို ဟုမ္မလင်းလွှတ်ပြီးဆရာဝန်ပင့်ခိုင်းထားတယ်”
ထွန်းအောင်ကျော်ရဲ့ ပွယောင်းထူအစ်နေတဲ့မျက်နှာကြီးဟာ ကျွန်တော်နဲ့ နီးလာလိုက်… ဝေးသွားလိုက်။ ဝေးသွားလိုက် … နီးလာလိုက်နဲ့ …
ဟင်္သာပြဒါးများလို ရဲစိုနေတဲ့ သူ့ရဲ့ ရီဝေဝေမျက်လုံးကြီးတွေကလည်း ကြည့်နေရင်းကြည့်နေရင်းကပဲ စိမ်းလိုက်…နီလိုက် …ဝါလိုက် …ပြာလိုက် …
ကျွန်တော့်ရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာကြီးကလည်း မှိုင်းဝပြီး ဖောင်းကားနေတဲ့ မီးပုံးပျံတလုံးလို လှုပ်အိ …လှုပ်အိနဲ့။
တိုးလျှိုးတောင်းပန်သံ၊ တွန်းထိုးကုတ်ခြစ်သံ၊ ကမ္ဘာလောကကြီးရဲ့ သက်ပြင်းရှိုက်သံ၊ ပန်းပွင့်တပွင့်ရဲ့ နူးညံ့မွှေးရီ ပွင့်ချပ် လွှာတွေ တလွှာချင်း တဖတ်ချင်း ကြွေကျသံ၊ ချင်းတွင်းမြစ်ရေကြည်ရဲ့ သဲ့သဲ့ဖွဖွ ညည်းညူသံ …..
ကျွန်တော့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာ မြူခိုးမှုန်မှုန်ရီရီကြားမှာ။ ချင်းတွင်းမြစ်ရေကြည်ထဲမှာ …။
စိမ်းမြရွက်ချွန်မျှင်တွေကြားမှာ …။ ။